(6) Umbindi wendawo! Amagumbi azolileyo e novobudov!
Ngakumbi rostašuvannya! Isakhiwo esitsha samagumbi amathandathu estudio somyili embindini wesixeko. Kumagumbi є yonke into iyimfuneko kubomi obungenamsebenzi kunye nexesha elifutshane.
Apartments zibekwe embindini amaziko olawulo kunye nembali, kwaye makube kubalulekile izakhiwo zembali, izikhululo zikaloliwe, likarnas, izikwere central, njl, ibekwe embindini uhambo main. Duzhe zruchna rozvyazka izithuthi ezinkulu. Ngelizwi: ayisentle ngakumbi.
Kwiiflethi є yonke into iyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile: - i-sofa ye-orthopedic yamagumbi amabini okulala, kunye ne-post_lnaya b_liznoyu, iitawuli; - kwi-vimoyu, igumbi lesikhumba lingagqitywa kunye nemikhono eyongezelelweyo yokulala yohlobo lwehotele, i-post_lnaya b_liznoy, iitawuli; -zonke izixhobo zobugcisa eziyimfuneko: Iseti ye-TV ene-flat screen, ifriji, umatshini wokuhlamba, i-microhvil's pich, i-kettle yombane, i-hairdryer, indawo yokuhlamba kunye ne-ironing board. Zonke amagumbi perebuyuyut phambi unogada. Ukuhanjiswa kwe-їzhі kuququzelelwe.
Qaphela: Onke amagumbi ayafana kuyilo, ifenitshala, itekhnoloji, ngendlela efanayo kunye neenkcukacha ezingabalulekanga (imizobo, imibala yamakhethini, imibala yetafile ...)
Inkampani "SV Luxdoba" inesiseko esibanzi sezindlu kunye namagumbi aseburhulumenteni. Sihlala siphucula uluhlu lweenkonzo, senze iindwendwe zethu zikhululeke kwaye zikhuselekile. Salungiselela ukhuseleko tsіlodobova, vіdesperezhennya e pіd "їzdі, unikezelo їzhі.
Siza kubiza iindwendwe zethu, solule yonke imiqathango yokuhlala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Uzhhorod